Fa raha mbola maharitra eto an-tany ny fotoanan'ny fiangonana dia mihatra ny fahasoavana. Ankehitriny na iza na iza dia afaka manatona an'i Jesosy ka ho voavonjy!
Ny antony iray mahatonga ny olona sasany tsy marina hanambara fa Andriamanitra dia mandefa didim-pitsarana dia ny manambara lalàna. Ary noho io lalàna io izy ireo dia manapa-kevitra raha tsy hitombo ny fahoriana lehibe.
Navotsotra amin'ny didy
Rom 3: 16-18. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy fa hanana fiainana mandrakizay. 17 Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. 18. Izay mino azy dia tsy voaheloka, fa izay tsy mino dia efa voatsara rahateo, satria tsy nino ny anaran'ny Zanakalahy Tokana.
Ity toe-javatra iray manontolo ity dia mampianatra antsika fa Andriamanitra naniraka an'i Jesosy hamonjy - hanafaka antsika amin'ny fitsarana. Voaheloka ny olona rehetra, saingy voaheloka amin'ny fitsarana rehefa mandray an'i Jesosy. Raha misy antony tsy te-handray an'i Jesosy dia avelao amin'ny fitsarana ianao.
Ny teny ao amin'ny Baiboly tsy milaza fa Andriamanitra dia mandefa didim-pitsarana, fa ny teny lazaina dia hoe nirahin'i Jesosy hamonjy sy hanafaka antsika amin'ny fitsarana isika. Tsy ara-baiboly sy mamitaka ny milaza fa Andriamanitra dia mandefa didim-pitsarana amin'ny alàlan'ny valan'aretina (toy ny coronavirus), ady ary loza tamin'ny fotoan'ny fiangonana sy ny fahasoavana.
Ny teny ao amin'ny Baiboly izay novakiantsika dia mazava fa tsy Andriamanitra no naniraka an'i Jesosy hitsara an'izao tontolo izao fa hamonjy azy.
Mazava ho azy fa tsy mila mitsara an'izao tontolo izao Andriamanitra satria efa voavaly sahady io! Ary mba ho voavonjy sy voavonjy amin'ity fitsarana ity dia mila mandray an'i Jesosy ianao ary ho voavonjy.
Jesosy koa dia naka fitsarana ary nanasazy tena rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana tao Kalvary. Ankehitriny rehefa nandray fitsarana i Jesosy, dia navotsotra isika. Ary voaheloka ho tonga amin'ny finoana Azy isika.
Raha avy navotsotra tamin’i Jesosy ny fanamelohana antsika, dia tsy ho azon ’Andriamanitra hampiharina intsony ny fitsarana amintsika. Jesosy dia efa nitondra izany!
Ny antony iray mahatonga ny olona sasany tsy marina hanambara fa Andriamanitra dia mandefa didim-pitsarana dia ny manambara lalàna . Ary noho io lalàna io izy ireo dia manapa-kevitra raha tsy hitombo ny fahoriana lehibe.
Ny fanangonana fanambarana toy izany dia apetraky ny olona ny fampakarana aorian'ny fipoahan'ny fahoriana lehibe, izay tsy azo ivalozana tanteraka. Izany no nahatonga azy ireo hanatsoaka hevitra fa Andriamanitra dia mandefa didim-pitsarana amin'ny alàlan'ny aretina, areti-mifindra, ady ary loza. Milaza anefa ny Baiboly fa tsy avy amin'Andriamanitra ny zavatra toy izany.
Ankehitriny angamba angamba ny mahita teny baiboly maloto ao amin'ny Testamenta Taloha, na amin'ny fomba hafa, ao amin'ny Testamenta Vaovao izay mety manondro fa mbola mandefa didim-pitsarana Andriamanitra, kanefa mbola tsy nahita zavatra toy izany ianao nandritra ny fotoanan'ny fiangonana.
Raha te hitory azy ireo ianao sy ny fahantrana dia tsy maintsy ataonao any an-kafa izany fa tsy eto amin'ny Apg29.nu. Satria eto amin'ity tranonkala bilaogy ity dia mitory ny filazantsaran'i Jesoa Kristy sy ny fomba hamonjena - tsy ny fampianarana diso izay mandefitra Andriamanitra sy ny fahantrana.
Tsy resy lahatra
Fomba hafa no nandikana ny Romanina 8: 1-4:
Romana 8: 1-4 Koa tsy hisy fanamelohana ho an'izay an'i Kristy Jesosy . 2 Fa ny lalàna ara-panahy mihatra amin'ny fiainan'i Kristy Jesosy dia nanafaka ahy tamin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. 3 Izay tsy vitan'ny lalàna, satria tsy ampy amin'ny maha-olombelona antsika. Rehefa namela ny zanany lahy ho tonga mpanota izy ary nandefa azy ho fanatitra noho ny ota, dia nanameloka ny ota tao amin'ny olona izy. 4 Araka izany, ny fangatahan'ny lalàna momba ny fahamarinana dia azo tanterahana amin'ireo izay miaina amin'ny fanahintsika fa tsy amin'ny maha-olombelona antsika. (Baiboly 2000)
Romana 8: 1-4 Ary amin'izany dia izao tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy . 2 Fa ny lalàn'ny Fanahy izay manome fiainana amin'ny alalan'i Kristy Jesosy, dia nanafaka antsika tamin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. 3 Ny lalàna, nalemy toy ny noho ny natiora, tsy afaka nanao izay nataon'Andriamanitra tamin'ny fandefany ny Zanany lahy izay namboarin'ny olona mpanota, ho fanatitra noho ny ota. Avy eo dia nanameloka ny ota tao amin'ny vatany izy. 4 Ary ny lalàn'ny fahamarinana dia azo tanterahina ao amintsika izay tsy tarihin'olombelona fa araka ny Fanahy. (NuBibeln)
Rom 8: 1-4 Tsy misy fanamelohana ho an'ireo izay ao amin'i Kristy Jesosy . 2 Fa ny lalàn'ny Fanahin'aina ao amin'i Kristy Jesosy dia nanafaka ahy tamin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. 3 Fa tsy zavatra tsy hain'ny lalàna, malemy tahaka ny avy amin'ny ota, nataon'Andriamanitra tamin'ny nanirahan'ny Zanany ny Zanany ho fanatitra noho ny ota, ary ny ivelany dia toa olona mpanota, ary tao amin'ny vatany no nanamelohan'Andriamanitra ny ota. 4 Dia ho tanteraka amintsika izay mitaky ny lalàna ao amintsika izay tsy miaina araka ny nofo fa araka ny Fanahy. (DIEM)
Rom 8: 1-4 Noho izany [noho ny nataon'i Jesosy, jereo ny Asa. 7:25], dia tsy misy fanamelohana ho an'ireo izay ao amin'i Kristy Jesosy . 2 Fa ny lalàn'ny Fanahin'aina ao amin'i Kristy Jesosy dia nanafaka ahy tamin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. 3 Izay tsy azo atao tokoa amin'ny lalàna, satria malemy noho ny fahalavoana (ny nofo). Nirahiny ny Zanany [ho izao tontolo izao] ho fanatitra noho ny ota, amin'ny vatan'ny olona mpanota (manana nofo, amin'ny vatana), ary nanameloka ny ota tamin'ny fahalavoana olombelona (mitsara sy manatanteraka ny fanamelohana amin'ny ota amin'ny nofo). 4 Toy izany ny fitakian'ny lalàna [tokana - manasongadina ny fahaizan'ny lalàna, jereo Rom 13: 9] dia ho tanteraka ao amintsika izay tsy mandeha (miaina) araka ny toetran'ny fahalavoana (ny nofo) fa manaraka ny Fanahy. (Core Bible)
Rom 8: 1-4. Noho izany, tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy , izay tsy manaraka ny nofo, fa araka ny Fanahy. 2. Fa ny lalàn'ny Fanahin'aina ao amin'i Kristy Jesosy dia nanafaka ahy tamin'ny lalàn'ny ota sy ny fahafatesana. 3. Fa inona no tsy vitan'ny lalàna, satria malemy tamin'ny nofo, dia Andriamanitra no nandefasany ny Zanany tamin'ny fitoviana nofo mpanota, ary noho ny ota, dia nanameloka ny ota tamin'ny nofo, 4. mba hahatanteraka ny fitakian'ny fahamarinana ny lalàna. ao amintsika izay tsy miaina araka ny nofo, fa araka ny Fanahy. (DIEM)
Vecka 24, torsdag 17 juni 2021 kl. 04:42